Substrate fanampiny | Reef Resilience
Ny morontsiraka tropikaly dia miatrika loza mitombo hatrany amin'ny tafiotra amoron-dranomasina miaraka amin'ny fanimbana ny haran-dranomasina lavitra. Manomboka mihena ny vatohara mipoitra rehefa mihena ny fatran'ny corolla ambany ambany amin'ny ambaratonga (eo amin'ny 10% sy ny 15%). ref Rehefa nidina ambany ny vatohara teo amin'ny tsanganana rano dia nihena ny angovo onja nosakanany. Ny fahasimban'ny haran-dranomasina, ampiarahana amin'ireo risika mitombo ireo dia mitambatra hahatonga ny tondra-drano sy ny fikaohon-tany lehibe kokoa. Mitombo ny fahalianana amin'ny fomba tsara indrindra hiatrehana ireo fanamby ireo. Ireo mpanapa-kevitra matetika dia mitodika any amin'ireo fotodrafitrasa namboarina toy ny moron-dranomasina izay manimba ny tontolo iainana ny morontsiraka. Vokatr'izany dia nisy fitomboan'ny fahalianana amin'ny fampiasana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampidirana substrate ho fomba hanatratrarana ny fiarovana ny morontsiraka (fampihenana ny risika) ary ny tanjon'ny fitantanana ny fiarovana.
Ireo orinasa mpanamboatra fiotazam-boasary na 'artifisialy', natsangana tamin'ny tranombakoka sy vato feno sy simenitra, dia napetraka tao amin'ny 2015 tao Grenville Bay, Grenada mba hiarovana ny morontsiraka marefo amin'ny hetsika mahery vaika sy ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro, toy ny fanimbana mafy. Ireo rafitra mpanamory fiara dia mahomby amin'ny fampiantranoana ny fiainana an-dranomasina, siramamy amin'ny vatohara ary manimba ny alokaloka coral. Sary © Tim Calver
Ny fanarenana ny haran-dranomasina dia nampiasa rafitra ara-teknika hanamboarana na hampiorenana ny sehatry ny haran-dranomasina taorian'ny fahasimbana lehibe ateraky ny fidiran'ny sambo, ny fitrandrahana, na ny jono nipoaka. Matetika ireo tetik'asa ireo dia nampiasa fitaovana vita amin'ny tanana (ohatra: vatosokay sokay, antontam-bato, simenitra vita amin'ny vy, vy, hazo ary kodiarana) izay tsy nahavita namboarina haran-dranomasina tamina rafitra. Ny tetik'asa fampidirana vovo-dranomasina maoderina ankehitriny dia mampiasa fitaovana voajanahary bebe kokoa ary mikatsaka ny hanatsara ny serivisy ara-pahasalamana sy ny tontolo iainana ho an'ny olona, ​​toy ny fiarovana ny morontsiraka. Amin'ny faritra sasany dia mety ilaina ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana ara-batana alohan'ny hisian'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiana-dranomasina sy ny vondron-trondro.
Ny fampidirana amboara, na ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny vatohara, dia mitaky fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa matihanina toy ny masoivohon'ny governemanta sy ny injenieran'ny kanto. Amin'ny lafiny maro, ny fiarahamonin'ny fiarovana ny haran-dranomasina dia manana fianarana betsaka avy amin'ny vondrom-piarahamonina oyster reef, izay miresaka momba ny famerenana amin'ny laoniny ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ireo roa taona lasa. Ireto fizarana manaraka ireto dia manome fampahalalana momba ny karazana struktures sy fomba fampiasana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fihenan'ny famotsoran-keloka 27 amin'ny Corolla lehibe momba ny harambato fisaka lehibe sy ny antony manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Ny tombontsoa, ​​ny fandaniana ary ny fahombiazan'ny fiarovana voajanahary voajanahary sy natiora manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Ny fahombiazan'ny haran-dranomasina ho an'ny fihenan-tsakafon'ny loza voajanahary manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlas ny harena an-dranomasina: Maps of Ecosystem Services